Uhlobo loKhuseleko oluPhezulu oluPhezulu lwe-IV catheter mveliso kunye nabenzi | Sanxin
Jiangxi Sanxin Medtec Co., Ltd ishishini eliphezulu-zobugcisa yesizwe iingcali izixhobo zonyango R & D, imveliso, ukuthengisa kunye nenkonzo. Emva kweminyaka engama-20 yokuqokelela, inkampani inombono wehlabathi, ilandelela ngokusondeleyo izicwangciso zophuhliso zesizwe, ilandela ngokusondeleyo iimfuno zeklinikhi, ixhomekeke kwinkqubo yolawulo lomgangatho ovakalayo kunye ne-R & D evuthiweyo kunye neenzuzo zokuvelisa, iSanxin ikhokele kushishino ukuba liphumelele Inkqubo yoLawulo lwekhwalithi ye-CE kunye ne-CMD.
◆ Isixhobo sokudibanisa uxinzelelo esingenasiphelo sinomsebenzi wokuhamba phambili endaweni yetyhubhu yoxinzelelo yokutywina, ukukhusela ukubuyela kwegazi, ukunciphisa ukucinywa kwecatheter kunye nokuthintela iingxaki zokungena ngaphakathi njengephlebitis.
Isixhobo senaliti esikhuselekileyo sokukhusela inaliti siqinisekisa ukuba ityhubhu yenaliti ikhutshelwa kwikepusi ekhuselayo emva kokuhlatywa kuphumelele, kuthintela ngokufanelekileyo abasebenzi bezonyango ukuba bangadlulwa ngengozi ngenaliti kwaye kuthintelwe usulelo olunqamlezileyo.
Egqithileyo Ingqondo ebandayo yezixhobo zokusebenzisa isisombululo esinye
Okulandelayo: Isirinji eyinyumba yokusetyenziswa kube kanye
Iibhanti zeCatheter Brands
Iv Catheter Iinaliti